Nerubatsiro rwe technoloy, panogona kuve nemusiyano mushoma pakati pedu nevatambi. Nezvido zvizere, piyano, mumhanzi uye nemanzwiro, zvinodzorwa nesu. zviitiko zvakawanda, zviyero uye mashandiro, inoyevedza uye ine simba, zvakanakira muiti akateedzana piyano yedhijitari. Ita mimhanzi uye kuridza piyano zvive chikamu chehupenyu hwedu.
Inotakurika huru piano yechokwadi pamutengo unodhura. Kuwedzera kunoshamisa kune inoremekedzwa YY renji, iyo inotakurika-inotakurika XXx inoratidzira nyowani Responsive Hammer Compact keyboard chiito, Harmonic Kufananidza 88-kiyi piyano sampling, uye yakavakirwa-muBluetooth® yekubatanidza kuendesa gig-inoshamisira yakakura piyano yekubata uye toni pa mutengo unodhura zvinoshamisa.
Plume Inotakurika Dhijitari Piano YY-02
Sense yesainzi uye tekinoroji ndiyo yehunyanzvi inotakura inoratidza vanhu kushuvira ramangwana. Plume Intelligent Piano, ndeyekuona mifananidzo nepfungwa yesainzi uye tekinoroji.Kubva pane shanduko dzepfungwa kusvika pakuwedzeredzwa kwepfungwa, mazuva ano, Plume Akangwara Piano inova tsika isingadzivisike mumumhanzi. Iyo fashoni nhevedzano yePlume Piano, ita kuti vanhu vanoda mimhanzi vanzwe kugunzva uye simba kubva pamoyo mune akasiyana maonero. Sezvisati zvamboonekwa. Ngatisunungurei pamwe chete.
Sense yesainzi uye tekinoroji ndiyo yehunyanzvi inotakura inoratidza vanhu kushuvira ramangwana. Plume Akangwara Piano, ndeye kuona mifananidzo nepfungwa yesainzi uye tekinoroji. Kubva pane shanduko dzepfungwa kusvika pakuwedzera kwepfungwa, mazuva ano, Plume Akangwara Piano inova tsika isingadzivisike mumumhanzi. Iyo fashoni nhevedzano yePlume Piano, ita kuti vanhu vanoda mimhanzi vanzwe kugunzva uye simba kubva pamoyo mune akasiyana maonero. Sezvisati zvamboonekwa. Ngatisunungurei pamwe chete.
Bach, Mozart, Chopin, Liszt… vaigadzira noti imwe neimwe vachiimba. Plume Piano, ine kwete chete nhetembo manzwiro, asi zvakare azvino, akasununguka uye akakwana manzwi mhedzisiro. 'Muimbi' anogara achidiwa nevaimbi. Inofarira imwe neimwe yakanaka manotsi kuva mimhanzi kutenderera pasirese.
Ichi chidimbu chehunyanzvi chinonzi Plume YY-DJ02. Iine yakakwira-giredhi PVC zvinhu zvekugadzira mugirazi ino senge yakasviba nhema yakavharwa pamusoro, zvese zvaitaridzika zvakaringana uye zvakaringana. Paunozvitarisa, pamwe zvinonyanya kunge zvakaomesa basa reunyanzvi, kupfuura piyano chete, chiridzwa.
Magetsi Grand Piano, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Magetsi Akarurama Piyano, Smart Piano Khibhodi, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Dhijitari Piano Kugadzirisa,